Eyona ntengiso ye-imeyile yokugqibela Cheatsheet | Martech Zone
NgoMvulo, Oktobha 21, 2013 NgoMvulo, Oktobha 21, 2013 UKelsey Cox
Zininzi izicwangciso kunye nemikhwa onokukhetha kuyo xa ucinga malunga nendlela yakho email kunye nokuthengisa umxholo. Uninzi lwabathengisi be-imeyile abasebenza kakhulu basebenzise amaqhinga ahlukileyo njengesicwangciso-qhinga, ixesha, ukuvavanya, kunye nokwenziwa koyilo ngokubanzi, kodwa leliphi iqhinga elinikezela iziphumo ezilungileyo? Yeyiphi ekufuneka ujolise kuyo ngaphezulu kwenye?
Ngabadlali abaqhelekileyo abachitha ixesha labo elininzi kuphuhliso lobuchule (23%) xa kuthelekiswa nabadlali abaphezulu bechitha ixesha labo liphela kwisicwangciso (22%), kuyacaca ukuba ukuhanjiswa kunokubaluleke kakhulu-nokuba kungangaphezulu komxholo ' Ukubonelela kwakhona.
Cinga, umzekelo, ukuba iipesenti ezingama-72 zabo bonke abathengisi bavavanya imigca yezihloko ze-imeyile ngaphambi kokuba bathumele kuluhlu lwabo lokuhambisa, ngelixa i-15% kuphela ivavanya ubeko lwee-imeyile kunye nokubonisa umfanekiso. Ngenxa yokuba i-75% yabanini be-smartphone "kunokwenzeka" ukucima ii-imeyile abangenakukwazi ukuzifunda ngokulula kwiifowuni zabo, ukusilela ekuqwalaseleni isibonelelo sokwenza ngcono iselfowuni kungakhokelela kwilahleko enkulu phakathi kwamaphulo ngamanye, singasathethi ke kwisicwangciso sonke sebrendi.
Le yenye yezinto ezininzi ekufuneka uzithathele ingqalelo xa ujonge ukuphucula intengiso yakho ye-imeyile. Ngethamsanqa, UMarketo udibanise izinto eziluncedo ”imeyile cheatsheet”Ukuze sibhekise kuyo ngethemba lokuphucula nokulungisa isicwangciso sethu se-imeyile:
tags: email MarketingAmanani entengiso